Zingaphi iintlanzi ezinokubekwa kwi-aquarium? | Ngeentlanzi
Zingaphi iintlanzi ezinokubekwa kwi-aquarium?
IsiJamani sasePortillo | | Ii-Aquariums ze-DIY
Omnye wemibuzo esisiseko ebuzwa ngabo bonke abafuna ukuqala kwihlabathi lee-aquariums yile zingaphi iintlanzi ezinokufakwa kwi-aquarium. Kukho izingqinisiso ezininzi ngokuxhomekeke kuhlobo olusuka kwi-aquarium onayo. Kuyimfuneko ukuba kuthathelwe ingqalelo iimpawu ezithile ekufuneka zifezekiswe yi-aquarium kunye nezinye izinto ukuze iintlanzi zikwazi ukuhlala ngendlela esempilweni kunye neyona nto ikufutshane kwindalo yazo.
Ke, kweli nqaku siza kukuxelela yonke into ekufuneka uyazi ukuba zingaphi iintlanzi ezinokubekwa kwi-aquarium.
1 Zingaphi iintlanzi ezinokufakwa kwi-aquarium
2 Ifuna intlanzi nganye
3 Zingaphi iintlanzi ezinokufakwa kwi-aquarium eshisayo okanye ebandayo
Zingaphi iintlanzi ezinokufakwa kwi-aquarium
Umgaqo osisiseko onokuthi usebenze njengesalathiso sokwazi ukuba zingaphi iintlanzi ezinokubekwa kwi-aquarium yi-1 litre ipesenti yeentlanzi ezindala. Iintlanzi kufuneka ziphile kamnandi kunye nokhathalelo oluncinci, phakathi kwazo, ube nendawo eyaneleyo.
Xa kuziwa ekwazini ukuba zingaphi iintlanzi esinokuzibeka kwi-aquarium, uhlobo lwempembelelo yetanki. Kunconyelwa ebanzi kwaye engekho nzulu endaweni yokuba ibe nzulu kwaye icekeceke, kuba ubukhulu bamanzi ovezwe emoyeni, kokukhona utshintshisa ngegesi ngamanzi, kuya kubakho ioksijini engakumbi kwaye iya kuba nakho ukugcina iintlanzi ezininzi. .
Ukuxinana kwi-aquarium akucetyiswa, ngaphandle kwenkolelo yokuba, ukuba iintlanzi zihamba ngokukhululekileyo, akukho nto yenzekayo. Ayifanelekanga kuba iintlanzi zinokuxinezeleka kwaye zingayonakalisa impilo yabemi bazo. Ukongeza, iintlobo zeentlanzi kufuneka zithathelwe ingqalelo kuba zininzi indawo kwaye azifuni ukuyeka indawo yazo yokuhlala.
Yonke intlanzi ifuna indawo yayo. Ukuxinana kwabantu ngokweenkcukacha kuya kusinika iingxaki ezininzi kwaye phakathi kwabo iyakuba yimfazwe eqhubekayo kuba iingxaki phakathi kwabo ziya kuhlala zikho: imilo, ukubethelwa kwamaphiko kunye nokutya abantu, kwaye ngaphezulu kwako konke, iingxaki ngamanzi, ukuhluza kunye nomgangatho kwindalo.
Umzekelo ovela kwi-aquarium yasekhaya:
Ngokubanzi kukho I-aquarium engama-60 cm ubude, i-30 ububanzi kunye ne-30 ubunzulu. Iintlanzi ezili-15 zamanzi amnandi ezi-5 cm zinokuhlala kamnandi kuyo. Ukusuka kulo mzekelo, i-aquarium eyahlukileyo inokwenziwa ngokubala ilitha enye yamanzi ngeesentimitha zentlanzi. Iintlanzi zamanzi acocekileyo zifuna amanzi amancinci kwintlanzi kuneentlanzi zetyuwa, kuba inkqubo yeoksijini ihamba kancinci. Kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba iintlanzi ziyakhula kwaye ukubalwa kufuneka kwenziwe njengentlanzi endala.
Ifuna intlanzi nganye
Into ebalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele kukuba intlanzi nganye ifuna indawo engakanani. Ulawulo lwelitha enye yamanzi kwisentimitha nganye kuba ikakhulu zibhekisa kwiiicichlids kodwa ihlala isebenza kuthi. Ukuba sifuna i-aquarium ityalwe ngezityalo zokwenyani okanye sinezinye iintlobo zeentlanzi ezinje i-koi carp kunye ne-goldfish Kufuneka ube namanzi amaninzi njengoko kumdaka kakhulu. Kule meko, iilitha ezili-10 zamanzi ziyacetyiswa kwisentimitha nganye yentlanzi. Kwezi ntlobo zeentlanzi zikhula kakhulu kwaye zingcolile, le nto kufuneka ithathelwe ingqalelo.
Kuya kufuneka ukhumbule enye inkcukacha enomdla ukwazi ukuba zingaphi iintlanzi ezinokubekwa kwi-aquarium. Enye yazo bubundlongondlongo okanye indawo ekuhlala kuyo iintlanzi. Kukho iintlanzi ezihlala umhlaba ngakumbi ngenxa yoko bafuna indawo yabo ukuze balawule. Ezi ntlanzi zihlala ziziva zonganyelwe ngakumbi ukuba zihlala kunye nezinye iintlanzi kwaye kufuneka babelane ngendawo enye yokuhlala. Ngokukodwa xa kufikwa ekusekeni iqabane okanye ukuba neentsana, baba ndlongondlongo kakhulu. Kulapho kufuneka songeze khona amanzi kwaye sibe nendawo enkulu ukuba sifuna ukugcina iintlanzi ezininzi.
Uninzi lweentlobo zezinto eziphilayo lubalaseleyo kwaye luthanda ukumisela indawo yazo ngaphakathi kwi-aquarium. Ke ngoko, ukuba i-aquarium yethu inenani elikhulu lolu hlobo lweentlanzi, siya kuba nakho ukuhlalisa abantu abambalwa. Njengesishwankathelo, sinokuseka izikhokelo eziphambili esazi iimeko eziphambili ezichonga ukuba zingaphi iintlanzi esinokuzibeka kwi-aquarium:
Inani lenkunkuma: Uhlobo ngalunye lweentlanzi luvelisa inani elithile lenkunkuma ekufuneka ithathelwe ingqalelo kwisithuba se-aquarium. Ubungakanani benkunkuma abayivelisayo, kokukhona inani leentlanzi kwi-aquarium linokuzibamba.
Ubungakanani abaya kuba nabantu abadala: kukho iintlobo ezininzi ezikhula kakhulu xa kuthelekiswa nobungakanani bazo xa zincinci. Enye yezona mpazamo ziphambili zisandula ukwenziwa kukungacingi ukuba izilwanyana ezinde ziya kuba njani xa zifikelela ebudaleni.
Ixabiso lokuvelisa kwakhona: Enye yeentlanzi ethengiswa kakhulu kwiindawo ezinamanzi amatsha ziiPoecillids. Olu hlobo lunesakhono sokuphucula ukuvelisa. Kulapha apho kufanelekileyo ukuhlalutya ukuba inani leentlanzi kunokuthiwa liyanda.
Inani lamadoda nabasetyhiniXa usazisa intlanzi kwi-aquarium, kubalulekile ukubala ukuba mangaphi amadoda kunye nokuba mangaphi amabhinqa esiwazisayo. Oku kunefuthe kwinqanaba lokuzala kwakhona.
Bala inani leentlanzi ezinokulingana: apha singasebenzisa umthetho woluntu kwilitha yamanzi kwisentimitha nganye yentlanzi. Kuya kufuneka utsho ukuba kwi-aquarium kukho okungaphezulu kokuloba kunye namanzi. Kwaye ngokuqinisekileyo sinazo izityalo, umhombiso, amacebo okucoca ulwelo, njl. Oku kubonisa ukuba umthamo weetanki uya kuba mbalwa.
Zingaphi iintlanzi ezinokufakwa kwi-aquarium eshisayo okanye ebandayo
Into ebalulekileyo ekufuneka uyithathele ingqalelo loluphi uhlobo lwe-aquarium esiza kuba nayo. Ukuba ezi ntlobo zinamanzi ashushu okanye abandayo ziya kuba neemfuno ezahlukeneyo. Iigesi zihlala ziguqulwa ngaphezulu kumphezulu we-aquarium. I-aquarium ikhupha i-carbon dioxide kunye neoksijini ekhoyo emoyeni Kuyimfuneko ukuba iphele inyibilika emanzini, iintlanzi zihlala kuyo. Omnye wemigaqo yokwazi ukuba zingaphi iintlanzi ezinokubekwa kwi-aquarium ukubala umphezulu wamanzi ukuze wazi ubungakanani beentlanzi esinokuba nazo. Umphezulu wamanzi ubalwa ngokusekwe kutshintshiselwano ngeegesi ekufuneka zibenekhabhoni kwioksijini nangaphandle.
Lo mgaqo usixelela ukuba singalungiselela isentimitha sentlanzi nganye kwi-12 cm² yomhlaba. Ngale ndlela sinokuthi kwintlanzi yamanzi abandayo sineesentimitha ezingama-62 kwisentimitha nganye yentlanzi. Kwelinye icala, kwintlanzi yetropiki sineesentimitha ezingama-26 kwisentimitha nganye sentlanzi.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nokuba zingaphi iintlanzi ezinokubekwa kwi-aquarium.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Ii-Aquariums ze-DIY » Zingaphi iintlanzi ezinokubekwa kwi-aquarium?
Akukho ntswelo okanye oksijini igqithileyo kwi-aquarium